iOS ရဲ့ အကောင်းဆုံး Feature ဖြစ်တဲ့ ‘ Restriction ‘ Option အကြောင်း -
iOS ရဲ့ အကောင်းဆုံး Feature ဖြစ်တဲ့ ‘ Restriction ‘ Option အကြောင်း
5 months ago Myanmar News Update
ခေါင်းစဉ်ကြီး ဖတ်ပြီး ငါတော့ မသိဘူး ။ မကြားဖူးသေးဘူးလို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ။
iPhone , iPad ကိုင်နေတဲ့ ယူစာအတော်များများ သိထား ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ‘ Restrictions ‘ နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ iOS 11 အထိ ‘ Restrictions ‘ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့် တည်ရှိနေခဲ့ပေမယ့် iOS 12 ကနေစပြီး Screen Time ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ပြောင်းရွှေ့ ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီ ‘ Restrictions ‘ ဆိုတဲ့ Option လေးကို အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Setting ထဲကနေ Screen Time ကို သွားပြီး ‘ Content & Privacy Restrictions ‘ ထဲကို ဝင်ရောက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ ခင်များတို့ ပြောပြောနေကြတဲ့ ဒီ ‘ Restrictions ‘ ကြီးက ဘာအသုံးဝင်လို့လဲ ၊ ဘာလုပ်လို့ ရလို့လဲ ဆိုပြီး အတွေးဝင်သွားပြီလား ။ ဒါဆို ဒီပို့စ်လေးကို ဆုံးအောင် ဖတ်သွားလိုက်ရင် အဖြေက ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် ။
‘ Restrictions ‘ လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်က သက်ရောက် နေပါပြီ ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုတွေ ကန့်သတ်လို့ ထားမှာလဲ ။ ရမှာလဲ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။
iOS မှာ Built-in ပါလာတဲ့ အရေးကြီး Feature Options တွေ အတော်များများကို မိမိမှတပါး အများသူငှါ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိအောင်လို့ ထိမ်းချုပ် ကန့်သတ်ထားလို့ ရပါတယ် ။
ဟိုး Long Long Ago တုန်းကထဲကနေ ဒီကနေ့အထိ ဒီ ‘ Restrictions Option ‘ နဲ့ ‘ Guided Access Option ‘ တို့ဟာ iOS ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Features တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယူစာတွေ မသုံးတတ်လို့သာ လူသိနည်းပြီး မေ့ပျောက်ခံ ‘ Feature Options ‘ တွေ ဖြစ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကလည်း အပြစ်ဆိုစရာတော့ မရှိပါဘူး ။ ဒီ Options တွေဟာ အသုံးပြုရတာ မရိုးရှင်းသလို ယူစာတွေ လိုလားတဲ့ Features တွေ အစုံ မပါဝင်လာသေးတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ ‘ Restrictions ‘ ဟာ အရင် iOS Versions တွေတုန်းကထက် အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုတွေ ရှိလာပါပြီ ။
လူသိနည်းနေပေမယ့် တကယ့်ကို ကောင်းမွန်ပြီး အသုံးဝင်လှတဲ့ ဒီ ‘ Restrictions Option ‘ ကို အသုံးပြုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ ။
ဒါက ‘ Content & Privacy Restrictions ‘ ထဲကို ဝင်လျှင် မြင်တွေ့ရမယ့် အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အပေါ်ဆုံးက ‘ Content & Privacy Restrictions ‘ ကို On ပေးလိုက်မှသာ အောက်က အခြားသော လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Options တွေကလည်း Enable ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
‘ Restrictions ‘ ကို On ပေးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ သူ့အောက်က Options လေးတွေအကြောင်းကို ဆက်လိုက်ရအောင် ။ အဓိက ခေါင်းစဉ်ကြီး ( ၃ ) ခု ရှိပါမယ် ။
* iTunes & App Store Purchases
* Allowed Apps
* Content Restrictions ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ပထမဆုံး Option ဖြစ်တဲ့ iTunes & App Store Purchases ကို ဝင်ရောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ iTunes & App Store Purchases ထဲမှာ အသုံးပြုမှု ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ထားခြင်တဲ့ဟာတွေကို ဝင်ရောက် ကန့်သတ် ပေးထားရပါမယ် ။
* Installing Apps ( Apps တွေကို ဒေါင်းခွင့် )
* Deleting Apps ( Apps တွေကို ဖျက်ခွင့် )
* In-app Purchases ( Apps တွေကို ဝယ်ခွင့် ) တွေ ရှိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကန့်သတ် ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။ Default အနေဖြင့် Allow ( ခွင့်ပြု ) ပေးထားပြီး ၊ ကိုယ်က Don’t Allow ( ခွင့်မပြု ) ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။
ဒါကတော့ ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Allowed Apps ပါပဲ ။ သူ့ထဲကို ဝင်လိုက်ရင်တော့ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း Home Screen ပေါ်က Feature Options အချို့ ရှိပါတယ် ။ ဒါက အသုံးပြုဖို့ ခွင့်ပြုထားခြင်လဲ ထား ၊ မထားခြင်လည်း ရတယ် ဆိုတဲ့ Apps တွေပါပဲ ။
နားရှုပ်သွားလား မသိဘူး ။ ဒီလိုပါ ။ အခု Enabled ဖြစ်နေတဲ့ ဒီ Apps တွေကို Disabled ( Off ထားလိုက်မယ် ) ဆိုရင် Home Screen ပေါ်မှာ အဆိုပါ Apps တွေကို မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ Search Bar ကို ဆွဲချပြီး အဆိုပါ Apps နာမည်ကို ရိုက်ရှာရင်တောင်မှ မပေါ်လာပါဘူး ။ အသုံးပြုချင်မှ ဝင်ပြီး Enable လုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ Home Screen ပေါ်မှာ အဆိုပါ Apps တွေ ပြန်ပေါ် လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒီတော့ အခြားသူ အသုံးမပြုစေချင်တဲ့အခါ ဒီအထဲကို ဝင်ပြီး Disabled ( Off ထား ) လိုက်ပေါ့ ။
တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ ဒီ Content Restrictions ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ခလေးငယ်တွေကို iPhone , iPad တွေ ပေးကိုင်တဲ့အခါမှာ ကန့်သတ်ပေးထားလိုက်သင့်တဲ့ Option ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
* သူ့အထဲမှာ Music တို့ TV တို့ရဲ့ Regions Store ကို ကြိုတင် သတ်မှတ်ပေးထားလို့ ရပါမယ် ။
* Music တွေ , Podcasts နဲ့ News တွေကိုလည်း ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော ဖော်ပြစေချင်သလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲလိုမျိုး မဟုတ်ပဲ ခလေးတွေ ကြည့်လို့ရမယ့် Clean တွေပဲ ပါစေချင်လားကို ဒီနေရာမှာ ရွေးပေးထားလို့ ရပါမယ် ။
* Music ရဲ့ Profiles တွေ , Posts တွေကိုရော ခလေးတွေကို တင်ခွင့် ပြုမလား မပြုလားကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါမယ် ။
* အခြားသော Movies တွေ , TV Shows တွေ , Books တွေ , Apps တွေကိုလည်း ခလေးတွေကို လုံးဝ မကြည့်နိုင်အောင် ကန့်သတ် ပေးထားလို့ ရတဲ့အပြင် Rating အဆင့်လိုက်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ သတ်မှတ်ပေးထားလို့ ရပါသေးတယ် ။
* Websites တွေကို ကြည့်ရှုရာမှာလည်း လုံးဝ မကန့်သတ်ထားတာ ၊ Limit Adult Websites အချို့ကိုပဲ ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ ကြိုတင် ထည့်သွင်းပေးထားနိုင်တာ ၊ လုံးဝ မကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ အဆိုပါ Websites လင့်ကို ထည့်သွင်း ပေးထားနိုင်တာ ၊ Default အနေဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Websites တွေအပြင် မိမိမှ အသစ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Websites တွေကိုပဲ ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့လည်း ကြိုတင် ကန့်သတ် သတ်မှတ် ပေးထားလို့လဲ ရပါမယ် ။
* Siri ကနေ Web ကို Search လုပ်တာတွေကိုပါ ပိတ်ထားလို့ ရပါမယ် ။ ဒါ့အပြင် Siri မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ အသုံးပြုတာကိုလည်း ပိတ်ထားနိုင်ပါဦးမယ် ။
* Game Center မှာ Multiplayer Games တွေကို မဆော့နိုင်အောင်လို့ ပိတ်ထားလို့ ရသလို ၊ Friends အသစ် ထပ်ထည့်တာ , Screen Recording လုပ်တာတွေကိုပါ ပိတ်ပေးထားလို့လဲ ရပါဦးမယ် ။
ဒီ Option မှာ ဒီလို Features တွေ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ခလေးငယ်များကို iPhone , iPad များ ပေးကိုင် အသုံးပြုရာမှာ မကောင်းတဲ့ လူဆိုး သူခိုးများ၏ အန္တရာယ်မှ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
အဓိက Main ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီး ( ၃ ) ခု ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ အောက်က ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေ အကြောင်းကို ဆက်ပါမယ် ။
Location Services ထဲကို ဝင်ပြီး မူလ Allow Changes အစား Don’t Allow Changes ကိုသာ ရွေးချယ်ပေးထားမယ် ဆိုရင် အခြားသူများမှ မိမိ Enabled လုပ်ထားတဲ့ Location Services ကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး ။ ( Location ကို On ထားရင် Off လုပ်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ ။ )
Contacts ထဲက Don’t Allow Changes ကိုသာ ရွေးထားမယ် ။ ဒါဆိုရင် Contacts နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ Apps တွေမှာ Contacts တွေကို Enable or Disable လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး ။
နောက်ထပ်လည်း Photos အသုံးပြုမှုတွေ , Bluetooth Sharing အသုံးပြုမှုတွေ , Microphone အသုံးပြုမှုတွေကိုပါ ပြောင်းလဲလို့ မရအောင် လုပ်ထားလို့ ရပါဦးမယ် ။
iPhone , iPad တွေရဲ့ Passcode တို့ , Fingerprint တို့ , Face ID တို့ကိုလည်း အခြားသူများ မမြင်တွေ့ရအောင်လို့ ဒီနေရာကနေ ဖွက်ထားလို့ ရပါသေးတယ် ။ Passcode Changes မှာ Don’t Allow ကိုသာ ရွေးပေးထားလိုက်ပါ ။ ( အခြားသူ မပြောနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ပါ အဆိုပါ Passcode Option ( Fingerprint ID / Face ID ) ကို ရှာလို့ မရသလို ၊ ဝင်လို့ပါ မရဘူး ။ )
Apple ID အကောင့်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးလည်း လုပ်လို့ ရပါမယ် ။ Account Changes မှာ Don’t Allow ကိုသာ ရွေးထား ။ မိမိ iPhone , iPad ရဲ့ Setting ထဲက Apple ID ကို Sign Out ( Log Out ) လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး ။ ( မိမိကိုယ်တိုင်တောင်မှ ID အကောင့်ကို နှိပ်လို့ မရတော့ပါ ။ )
Cellular Data Changes မှာလည်း Don’t Allow ကိုသာ ရွေးထားတယ်ဆိုရင် Control Center ကနေ Internet Data အပိတ် အဖွင့်ကို လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး ။ ( Setting ထဲကနေတော့ လုပ်လို့ ရပါမယ် ။ Setting တစ်ခုလုံးကို Locked ဖြစ်သွားစေချင်တာ ။ အခုဟာက မပြည့်စုံဘူး ။ ဤကား စကားချပ် ???? )
အရင် iOS Versions အဟောင်းတွေတုန်းကတော့ ဒီ ‘ Restrictions ‘ ထဲကို ဝင်ပြီး Enable လုပ်လိုက်တာနဲ့ ‘ Restrictions ‘ အတွက် ‘ Passcode ‘ ဂဏန်းတွေကို သတ်မှတ် ပေးလိုက် ရပါတယ် ။ ( မြန်မြန် ရိုက် မြန်မြန်ထည့်ပေးလိုက်နဲ့ပေါ့ ။ )
ဒီတော့ ဘာတွေ ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ …
အဆိုပါ ‘ Restrictions Passcode ‘ ကို မမှတ်မိပဲ မေ့သွားကြတဲ့ ပြဿနာပါပဲ ။ သတ်မှတ် Passcode ရယ် ၊ Comfirm Passcode ရယ် ( ၂ ) ကြိမ် ( ၂ ) ခါ ရိုက်ထည့် ပေးရတာ မှန်ပေမယ့် ယူစာအတော်များများက အဆိုပါ Passcode ကို သတိရလေ့ မရှိတတ်ကြပါဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း Group မှာ မကြာခဏ ဒီ ‘ Restrictions Passcode ‘ မမှတ်မိတဲ့ Posts တွေ မြင်နေ တွေ့နေ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
iOS 12 မှာတော့ ဒီပြဿနာကို အတော်အတန် သက်သာ သွားစေပါပြီ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ …
‘ Content & Privacy Restrictions ‘ ကို On ပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာ Passcode ကို တစ်ခါထဲ တန်းပြီး ထည့်ပေးစရာ မလိုအပ်တော့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Setting ထဲက Screen Time ကို ဝင်ပြီး ‘ Use Screen Time Passcode ‘ ကို နှိပ်ကာ မိမိကြိုက်တဲ့ အချိန်မှ ‘ Restrictions ‘ အတွက် Passcode ကို သတ်မှတ် ပေးလို့ ရလာတဲ့အတွက် အဆိုပါ Passcode ကို အချိန်ယူပြီး ထည့်ပေးလို့ ရလာပြီဖြစ်လို့ အဆိုပါ ‘ Restrictions Passcode ‘ မေ့သွားခြင်း ပြဿနာလည်း အတော်အတန် ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီ ‘ Restrictions Option ‘ ဟာ ‘ Guided Access Option ‘ လိုပဲ iOS ရဲ့ အကောင်းဆုံး Features အဖြစ် ပါဝင်နေရလဲ ဆိုတာကို သိရှိလောက်ပါပြီ ။
Wish all peace.
Previous Latest iOS Version အမြင့်မှ iOS Version အနိမ့်သို့ Downgrade ဆင်းနည်း
Next iOS အတွက် Adobe ရဲ့ Aero Augmented Reality App
How to Optimise iPhone Battery Charging
4 months ago Zar Ni
Apple ID ကို Secure ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
5 months ago Zar Ni
iPhone , iPad ပေါ်က Notes တွေကို Two-Finger နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Delete လုပ်နည်း
iPhone 11 Pro ၏ Night Mode ကို iPhone XS , iPhone X နှင့် iPhone 8 တို့ပေါ်ကနေ အသုံးပြုနည်း
iOS အတွက် Adobe ရဲ့ Aero Augmented Reality App
Latest iOS Version အမြင့်မှ iOS Version အနိမ့်သို့ Downgrade ဆင်းနည်း
How to Optimise iPhone Battery Charging November 18, 2019
iOS 13 ရဲ့ Dark Mode ကတကယ်ပဲ Battery Life ကိုတိုးစေတာလား ? November 16, 2019
၂၀၂၀မှာ 5G smartphone leader က Apple ဖြစ်နိုင်မလား November 16, 2019
iOS ရဲ့ Facebook App မှာ ပါလာသည့် Camera Bug ကို Facebook မှ Fixes လုပ်ပေးလာ …. November 15, 2019
Apple ID ကို Secure ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း November 14, 2019
iOS 13 ရဲ့ Dark Mode ကတကယ်ပဲ Battery Life ကိုတိုးစေတာလား ?
4 months ago Myanmar News Update
၂၀၂၀မှာ 5G smartphone leader က Apple ဖြစ်နိုင်မလား
iOS ရဲ့ Facebook App မှာ ပါလာသည့် Camera Bug ကို Facebook မှ Fixes လုပ်ပေးလာ ….